Krkonoše historické fotografie - Free premium music themes market downloads
HomefotoNnukwu Ugwu akụkọ ihe mere eme
Nnukwu Ugwu akụkọ ihe mere eme	Hapụ ikwu
Ndabere nke mejupụtara ihe banyere ala na-ejuputa elu nke elu nkume ma ọ bụ nkume ndị dị na nkume mbụ (mgbachi). N'ebe ọwụwa anyanwụ nke ugwu ugwu ahụ, ala ala anaghị adịkarị. Okpomọkụ crystallinic oge ochie abanye n'ime ebe ụfọdụ na Krkonoše-Jizerský pluton (granite). Mmiri ndị na-egbuke egbuke nke ebe ndị ahụ na-ekpo ọkụ bụ ndị na-egbukepụ egbukepụ nke na-egosipụta ala ime obodo. E nwere ụdị abụọ glaciers. Nke mbụ bụ ndagwurugwu-ụdị glaciers na nke abụọ bụ ụdị Scandinavian. Ugwu miri emi (obosara Ekwensu, wdg) na-ekpuchi ya site na ya.
Maka echiche ka mma, anyị nwere ike ilele iceba na Scandinavia nke na-egosi otú ọ dị Giant Mountains nwere ike ile anya. Ihe nlereanya kachasị mma nke ọrụ glacial bụ, dịka ọmụmaatụ, Elbe Mine ma ọ bụ Giant Mine, nke bụ ndagwurugwu nke glaciers kpatara. Ndị ọzọ na-ekpo ọkụ glacial bụ ndị na-ekpuchi ọkụ (v Giant Mountains a maara "break"). Okwesiri ikwu banyere Kotelní damy na olulu Snow nke di na Poland. Kary bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ọnụ anyị nwere ike ime Giant Mountains n'ihi na ha bụ ugwu kachasị oke nke Oké Osimiri Ukwu. Ọrụ mkpuchi v Giant Mountains ọ dị mkpa ịkpọtụrụ, dịka ọmụmaatụ, oké nkume oké nkume (ugwu dị elu) ma ọ bụ ụlọ ndina oyi.
Na ókèala nke Giant Mountains na nsogbu Giant Mountains National Park (KRNAP) ebe nke 36 400 ha, bụ onye e kwuru na afọ 1963, na Karkonoski Park Narodowy (KPN), tọrọ ntọala na 1959. The-echebe mpaghara nke mba ogige bụ na Czech n'akụkụ nke ebe 18 400 ha. Mountains nwekwara ebe 1992 bilateral Biosphere Reserve kwusara site na United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (nke ebe Czech nke 54 800 ha). E kewara KRNAP n'ime I., II. na III. oghere nchedo, ebe ebe mbu nke abuo kachasi ihe bara uru na usoro nchedo kachasi anya. Nke a pụtara, dịka ọmụmaatụ, usoro nke I. na II. A machibidoro mpaghara ka ịkwaga n'èzí mara njem nleta na usoro skiing. A na-amarakwa ebe ugwu Krkonoše dị ka ebe nnụnụ na nnukwu nnụnụ na-ekpuchi akụkụ dum nke ebe nchekwa biosphere, n'otu n'otu. ogige mba gụnyere mpaghara nchekwa.
Oké Ugwu ahụ si n'ebe ihu igwe na-ele ugwu ugwu kachasị elu na Czech Republic. Enwere ike iji tụnyere ọnụ ala ndị na-ede n'elu ebe mpempe 1400 m na Green Coast. Okpomọkụ dị iche na nke elu. Ka ihe atụ, ná nkezi, okpomọkụ na Trutnov bụ 6,8 degrees Celsius, mgbe on Sněžka, nke bụ coldest ebe nke Giant Mountains, nkezi afọ okpomọkụ 0,2 degrees Celsius. N'otu oge ahụ, ọ bụ ebe oyi kasị dịrị na Czech Republic. Ọnụ mmiri ozuzo dị na Oké Osimiri Ukwu na-adabere n'ọdịda elu na ndagwurugwu. Mara eziokwu bụ na ebe ke West Giant n'oge afọ nwere ihe mmiri ozuzo karịa ebe dị n'ebe ọwụwa anyanwụ n'ugwu, dị ka na Czech Republic adịkwaghị Western ikuku eruba. Kasị ọdịda dara ke ndaeyo ọnwa n'oge oké ifufe na mmiri ozuzo na-erughị na March, ma n'ihi na nnukwu ego nke snow na ọ bụ obere kwesiri ngosi.
Ọ bụ ezie na Oké Osimiri Ukwu bụ ugwu kachasị elu na Czech Republic, ọ dịghị ka ọ bụ ihe kachasị elu n'ihi na Krkonoše Mountains nọ na mmiri ozuzo nke ugwu Jizera. N'elu ugwu, ọnụ mmiri ozuzo banyere 1300 mm / afọ, ma na ndagwurugwu ọ nwere ike ruo 1500 mm / afọ. Akụkụ ọzọ nke ọdịda bụ ezigbo snow, nke bụ akụkụ dị mkpa nke Oké Osimiri Ukwu. Ná nkezi, ụbọchị nke mbụ snowfall na Krkonoše Ugwu enweghị ike ikwu n'ihi na ọ nwere ike snow na ridges fọrọ nke nta niile n'afọ gburugburu. Okpukpu uhie na-adịgide adịgide dị n'ogologo na etiti November ruo May. Nnukwu ntukpu snow na-aga na ndagwurugwu (Map nke mba ebe snow ruru ruo 15 mita!). Ọtụtụ mgbe, n'ugwu ukwu ahụ, oké ifufe na-efe (ifufe nke kachasị elu nke a tụrụ na Sněžka 216 km / h).
Mmiri mmiri Mmiri mmiri →